Ahoana no fomba hahitana tester beta ho an'ny Spotify amin'ny Android | Androidsis
Spotify no fampiharana mozika malaza indrindra amin'izao fotoana izao. Mpampiasa Android an-tapitrisany no mampiasa azy io, ankoatry ny fahafahany manararaotra betsaka amin'ny findainy amin'ny tetika isan-karazany. Nandritra ny volana maromaro, nampiditra endrika vaovao marobe ho an'ireo mpampiasa ity fampiharana ity. Ny iray amin'ireo vao haingana indrindra dia ny fahafahan'ny fahafaha-manao sakano ny mpanakanto ao amin'ny fampiharana.
Maro amin'ireo fiasa ireo no afaka mitsapa izy ireo alohan'ny hahatongavany amin'ny Spotify amin'ny fomba ofisialy. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy tafiditra ao amin'ny programa beta an'ny fampiharana ianao. Ity dia zavatra mety ho tratran'ny mpampiasa amin'ny Android, raha manaraka dingana vitsivitsy ianao. Atorinay anao izay.
Meteza ho mpandalo beta amin'ny fampiharana toa an'i Spotify mamela anao hizaha toetra ny fiasa rehetra alohan'ny mpampiasa hafa. Ka ho an'ny maro dia mety mahaliana ny mahavita an'io. Na dia zava-dehibe aza ny fahafantarana fa ny maha beta, kinova fitsapana, dia mety misy tsy fetezan-javatra ao amin'ny fampiharana. Tandindomin-doza tokoa izany, izay tsy maintsy raisina.
Fa raha misy mahatsapa izany, dia mety te ho beta tester ianao ao amin'ny fampiharana streaming mozika malaza. Ireo dingana tokony harahina amin'ity lafiny ity dia tsy sarotra ary hamela ny fidirana amin'ireo fiasa mahaliana rehetra ao aminy. ¿Inona no hatao amin'ity tranga ity? Asehonay anao eto ambany ny dingana rehetra arahinao.
1 Beta tester ao amin'ny Spotify
2 Inona no tsy maintsy ataonao amin'ny andrana beta?
Beta tester ao amin'ny Spotify
Tsy toy ny rindranasa hafa, izay mamela anao ho tester beta ho an'ny Play Store, amin'ny tranga Spotify dia hafa ny dingana arahana. Satria ny zavatra voalohany tokony ho iray, dia ny hanatevin-daharana ny vondrona Google mpanandramana beta. Ity dia zavatra azo atao amin'ny alàlan'ny fidirana ity rohy ity Ao no tokony hidiranao ao amin'ilay vondrona. Noho izany, tsy maintsy tsindrio ny bokotra hidirana raha te ho ao amin'ity vondrona Google ity.
Rehefa efa niditra an'io vondrona io ianao ary nanatevin-daharana azy dia anjaran'ny dingana manaraka. Amin'ity tranga ity, ny zavatra tsy maintsy ataonao dia mankany amin'ny pejy Fitsapana beta Spotify ao amin'ny Google Play. Mba hanaovana izany dia azonao atao fidirana mivantana amin'ity rohy ity. Raha vantany vao tafiditra ianao dia ho hitanao fa misy bokotra iray izay isehoan'ny lahatsoratra hoe tonga tester. Noho izany, raha afaka manao izany, ny mpampiasa dia tsy maintsy manindry ny bokotra voalaza.
Amin'izany fomba izany, iray dia efa lasa tester beta ofisialy Spotify. Ny zavatra voalohany tokony hatao dia ny fanavaozana ny rindranasa, raha sanatria ka misy ny kinova vaovao, ankoatry ny fanaovana ity fanovana ity amin'ny fomba ofisialy. Mba hanaovana izany dia mila miditra amin'ny Google Play amin'ny mombamomba ny fampiharana ianao ary tsindrio ny bokotra fanavaozana. Avy eo havaozina ny kinova fampiharana apetraka amin'ny Android. Ny zavatra ataony dia ny fametrahana beta eo ambonin'ny kinova mahazatra.
Inona no tsy maintsy ataonao amin'ny andrana beta?
Manomboka izao dia mila miandry ny kinova beta amin'ny fampiharana ianao amin'ny telefaona. Isaky ny matetika, matetika herinandro vitsivitsy, beta vaovao amin'ny fampiharana no alefa amin'ny Android. Amin'izany fomba izany, ireo mpampiasa izay ao anatin'ity programa beta tester beta ity, izay anisany anao izao, izy ireo dia ho afaka ny hizaha toetra ny endri-javatra vaovao rehetra ny fampiharana.
Amin'ny maha beta anao, mety ho tsikaritrao indraindray fa tsy mandeha tsara ny Spotify. Na ny sasany amin'ireto fiasa vaovao ireto dia tsy mahavita miasa tsara. Tanjon'ity programa beta ity ny mamaritra raha misy hadisoana. Ny lesoka rehetra izay hitan'ny olona iray, azo taterina mivantana amin'ny Spotify, ka fantatr'izy ireo ary afaka mandray andraikitra amin'izany. Ilaina ny tamberina manoloana izany. Ka raha mahita bibikely ianao dia aza misalasala mitory azy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ahoana ny fisoratana anarana amin'ny beta Spotify amin'ny Android
Azonao atao izao ny manambatra ny kaontinao Fortnite. Atorinay anao ny fomba fanaovana azy
Miseho ny sary mivantana an'ny Sony Xperia XA3 ary misy lafiny manan-danja maromaro voadinika